को हुन् नवनियुक्त अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई ? Nepalpatra को हुन् नवनियुक्त अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई ?
यस्तो छ नवनियुक्त अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको जीवनी
पृष्ठभूमि : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई नियुक्त गरेकी छन् । उनले राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा सपथ ग्रहण गरेलगत्तै नक्साल टंगालस्थित कार्यालयमा आएर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।
२०१८ सालमा संखुवासभा जिल्लाको खोरन्डे गाउँमा मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएका राईले संखुवासभाको खाँदबारीस्थित हिमालय माविवाट २०३५ सालमा एसएलसी पास गरे । एसएलसी पास गरेपछि उनी उच्च शिक्षका लागि काठमाडौं आएर २०३६ सालमा शंकरदेव क्याम्पसमा आई.कममा भर्ना भए । तर, त्यो बेला आन्दोलनका कारण २०३९ सालमा मात्रै आइकम पास गरे । मिनभवन क्याम्पसबाट वि.कम गरे भने २०४५ सालमा शंकरदेव क्याम्पसबाट उनले एमबिए पास गरे ।
उनले अध्ययनकै क्रममा २०४० साल साउन १ गते सरकारी जागिर लेखापालमा नाम निकाले । घरबाट खर्च पढाउन समस्या भएपछि उनले जागिरको बाटो रोजेका थिए । महालेखा परीक्षक अन्तर्गतको जागिर गर्दा उपत्यका बाहिर जान नपर्ने र काम सकिएपछि पढ्ने समय पनि पाइने भएका कारण उनले त्यो जागिर रोजेका थिए ।
सोही क्रममा उनले २०४४ सालमा शाखा अधिकृतमा नाम निकाले । उपसचिवका लागि २०४९ सालमा लिखित प्रतिस्पर्धामा पनि राईले नाम निकाले । सहसचिव हुँदा अख्तियारमै बसेर लामो समय काम गरेका राई कम विवादित व्यक्ति मानिन्थे ।
सचिव भएर राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा काम गरे ।
२२ महिना गृहसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका राईले गृहसचिवका रुपमा २०७६ साल माघ २२ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपनि त्यसको ३ दिनअगाडि २० माघदेखि लागु हुनेगरी सरकारले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो ।
गत मंसिर ३० को बेलुकी ५ बजेपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । सोहि आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई आज उक्त आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेपछि उनले आजै कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीदेखि गृहमन्त्री थापासम्मको विश्वास जित्न सफल
राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त नजिकका विश्वासपात्र हुन् । पदमा बहाल रहँदा निजामती प्रशासकबीच ‘पोलिटब्युरो सचिव’ भनेर व्यंग्य गरिने उनी गृहसचिव हुँदै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका छन् । राईले गृहसचीव हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सम्मको विश्वास जित्न सकेका प्रशासकको रुपमा उनलाई हेरिन्थ्यो ।
राईलाई लाग्ने गरेको आरोप
राईका लागि प्रमुख आयुक्त पद नसुहाउने टिप्पणी पनि हुने गरेको थियो । पूर्वसचिव राई आयल निगमको जग्गा र नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा मुछिएका थिए । राईकै कारण नेपाल आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले जग्गा खरिदको घोटलामा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्न ढिलो गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।
राई आपूर्ति सचिव हुँदा आयल निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही, झापा लगायतका जिल्लामा डेढ अर्व भन्दा बढिको जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा थिए – पूर्व आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई । कार्यान्वयन गर्ने खड्का भ्रष्टाचारमा तानिए तर निर्णय गर्ने राईमाथि भने कुनै छानविन नभएको भनेर विपक्षीले उनलाई आरोप समेत लगाउने गर्छन् ।
अख्तियारको सचिवमा राई छँदा खड्कामाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि बढाउन समेत उनले आफूपनि तानिने डरले नदिएको भन्ने आरोप उनलाई लाग्ने गर्छ । यसरी भ्रष्टाचारीलाई बचाउने राई आफै अख्तियारको प्रमुख बनेर आउँदा कति भ्रष्टाचारीहरुले उन्मुक्ति पाउलान ? अख्तियार भित्रकै कर्मचारीहरु प्रश्न गर्छन् ।
अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक नै लकडाउनले ठप्प भएका बेला गत असारमा अख्तियारले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका पूर्वसचिव राईलाई संसद्को लेखा समितिबाट जोगाइएको थियो । २०७५ पुस २० गते समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका सांसदहरूले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राई निर्दोष रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उनको नाम हटाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
राईले गरेको राम्रो कामको प्रशंशा
प्रेमकुमार राईले गृहसचिवका रुपमा २०७६ साल माघ २२ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाए । उनले अवकाश पाएकै दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरुसहित १७५ जनामाथि मुद्दा दायर गर्यो ।
राईले नै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चासो लिएर अनुसन्धान गर्न लगाएका थिए । उनकै निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको सीआइबीलाई अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटोको जिम्मा दिइएको थियो । राईले यो मामलामा निकै चासोका साथ कदम चालेका थिए । त्यसैले पनि उनी अवकाश नहुँदै अख्तियारले यो विषयमा मुद्दा दायर गरेको हुनसक्छ ।
यसरी गराइयो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले शपथग्रहण (फोटो फिचर)
किन सिफारिस गरे प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राईलाई ?